ဆန်ဆေးရေအစွမ်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၂၀၀ ခန့် ၀ိတ်ချခဲ့သူ ဒေါက်တာလှဝင်းအောင်၏ ကိုယ်တွေ့ ၀ိတ်ချနည်း
By Aung Aung on Monday, May 20, 2019
The Voice Myanmar Season2ရဲ့ အရှိန်မြင်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ Battle Round မှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အကြိုက်သီဆိုနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပြိုင်ပွဲမှာ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအဆင့်ကိုကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် Knock out Round မှာ ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ ခွန်းဝတီပြည့်ကို အားလုံးပဲသိကြပြီးဖြစ်မှာပါ ။ ခွန်းဝတီပြည့်ကတော့ အခုမှအဆိုပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကလည်း Melody World မှာ လည်းဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုကျနော်တို့ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်တွေကို တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ခွန်းဝတီပြည့်က8 Days နဲ့မီဒီယာမှာပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းတွေကို ပြန်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခွန်းဝတီပြည့်က “ The Voice ကို Season 1 တုန်းကကြည့်ဖြစ်တယ်။ တချို့သူငယ်ချင်းတွေက ပါကြတယ်။ ပြည့်ကလည်း ပြိုင်ချင်တာပေါ့ အဲ့ဒီနှစ်တုန်းကလည်း ပြည့်မသိလိုက်ဖူးလေ မသိလိုက်တော့ …
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာကတည်းက အောင်မြင်မှုတွေ များစွာဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ရွှေမှုံရတီက လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီး တစ်ဦးဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက အသက်(၂၀) အရွယ်မှာ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ရွှေထူးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေးကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက အခုလက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝလေးကိုလဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းအောင် နေထိုင်နေပြီး အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက လက်ရှိမှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးပေးနေရင်း အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို အားတက်သရော ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကတော့ ရွှေမှုံရတီက သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ “သူစိတ်မပူတော့တဲ့အခါ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီတစ်ယောက် ဘယ်သူ့ကိုများ စိတ်ကောက်နေတာလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်စားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီတစ်ယောက် ရွှေထူးဆီက …
အရပ်မြင့်မြင့် ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ အောင်လေးတစ်ယောက်ကတော့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသည်းစွဲပါပဲနော်။သူကတော့ မော်ဒယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သူပါ။သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်တဲ့သူမို့ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားသမျှ MTV တွေဆိုလည်း ပရိသတ်ကြားရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော် ဝနရဲ့ အနီးဆုံးလူ သီချင်းထဲမှာဆို သီချင်းလေးကလည်း ကောင်း သရုပ်ဆောင်လေးကလည်းမိုက်ဆိုတော့ လူငယ်တွေအကြိုက်များခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ မော်ဒယ်အောင်လေးဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာပါ သူ့ရဲ့အရည်အချင်းတွေထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည် ဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ မင်းသားဇေရဲထက်နဲ့အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို အပြည့်ဝ ရခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှရုံတင်ပြီးသွားတဲ့ လေဆန်ကကြိုးဇာတ်ကားမှာလည်း ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အောင်လေးကတော့ လတ်တလောမှာရွယ်တူတွေနဲ့ပဲပေါင်းဖြစ်တော့တယ်ဆိုပြီး သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပုံတွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာမျှဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူနဲ့ရွယ်တူဘော်ဒါတွေဆိုပြီး တစ်ခြားတော့မထင်လိုက်နဲ့နော်။ သူ့ရဲ့ချစ်စရာတူလေးနှစ်ယောက်ပါတဲ့။ချစ်စရာကောင်းတဲ့တူရီးသုံးယောက်ပုံတွေကို မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးအတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပြီနော်။ Silver Ref:Aung Lay’s Facebook
ယွန်းယွန်းဟာဆိုရင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အကယ်ဒမီဆုကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အရည်အချင်းရှိမင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝကတည်းက အခုအချိန်ထိ် ပရိသတ်တွေရှေ့မှောက်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကသည်းသည်းလှုပ်ချစ်ရတဲ့ မင်းသမီးလေးလည်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက ယွန်းယွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချစ်ရေးကောလဟလတွေထွက်လာခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေက လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြရပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယွန်းယွန်းက မီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။ ယွန်းယွန်းက လက်တလောထွက်နေတဲ့ အချစ်ရေးကောလဟလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး “ညီမက ဒီအရွယ်မှာ ဒီလိုမျိုး Dating News တွေထွက်မယ်ဆိုတာ အဲဒါကြီးကို ထွေထွေထူးထူးမခံစားတော့ဘူးပေါ့နော်။ ဒါက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ်။ ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်လာတာ။ အဲ့လိုမျိုးပဲညီမတွေးပါတယ်။ ညီမ ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုကတည်းက ဒါ ညီမကိုချစ်လို့ပြောနေတာ။ စိတ်ပူပေးလို့ပြောနေကြတာဆိုတော့ ညီမ အဲ့ဒါကို ပျော်စရာအနေနဲ့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်”လို့ဖြေထားပါတယ်။ ချစ်သူရှိရင် ပရိသတ်ကိုအသိပေးမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း “ညီမ Fans တွေကလည်း ပြောတယ်။ ချစ်သူရှိရင်လည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲနေပါ။ သူတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်မှာပဲဆိုတော့ ညီမကံကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ ဝမ်းသာတယ်။ ညီမရည်းစားထားလို့ရှိရင်ပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်။ အခုကတော့ ဘာမှထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိသေးဘူးပေ့ါနော်။ ဒီတိုင်းပဲ။ မထူးသေးဘူးပေါ့နော်”လို့ …
ဆန်ဆေးရေအစွမ်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၂၀၀ ခန့် ၀ိတ်ချခဲ့သူ ဒေါက်တာလှဝင်းအောင်၏ ကိုယ်တွေ့ ၀ိတ်ချနည်း..နိုင်ငံတော်မှ ဘွဲ့ဆုတံဆိပ်များစွာ ချီးမြင့်ခြင်း ခံထားရသူ ဒေါက်တာလှဝင်းအောင်က အဘိဓမ္မာ ဆရာတစ်ဦး၊ လူမှုရေးအလုပ်များစွာ လုပ်ဆောင်သည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် လူသိများသူဖြစ်သည်။ သူပြောပြထားသည့် ဆန်ဆေးရည်၏ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပအကျိုးကျေးဇူးများကို အများပြည်သူဗဟုသုတရရှိစေရန် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါသည်။“ဆန်ဆေးရည်ကြောင့် အသက်၄၀ ကျော် အရွယ်တွေ ငယ်ရွယ်နုပျိုစေနိုင်ပြီး အရွယ်သုံးပါးလုံးအတွက် တန်ဖိုးနည်းပေမယ့် စွမ်းတဲ့သဘာဝဆေးပါ။ ဆန်ဆေးရည်အစွမ်းကြောင့် နေလောင်၊ မှဲ့ခြောက်၊ တင်းတိတ်နဲ့ မျက်နာအရေးကြောင်း၊ အရေပြား ပျော့တွဲတွဲဖြစ်နေခြင်းတွေ ပျောက်ကင်းသက်သာကြောင်းကို ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့နဲ့ သုတသန္နိစယ ကျမ်းပါနန်းတွင်းသုံးသဘာဝရဲ့ ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ကြောင်းကိုပါ ပြောပြပေးချင်တာပါ။မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးကို ထူထောင်ခဲ့တဲ့ မင်းတုန်းမင်းကြီး လက်ထက်တော်အခါတုန်းက မင်းကြီးရဲ့ မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ မယ်သဲ(ခေါ်)မယ်ညွန့်ဟာ အ၀လွန်တာကြောင့် မင်းကြီးရဲ့ငယ်ချစ်သခင် ဖြစ်ပါရက်နဲ့ တောင်နန်းစံမိဖုရားခေါင်ကြီးဘ၀ မဖြစ်ရရှာဘဲ …
မြန်းဆိုတဲ့ ဝင့်ယမုံနိုင်ကတော့ ပရိသတ်ကြီးအားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့ MRTV-4 မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေထဲက ထားဝယ်သူလေးတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် စရောက်တုန်းက ဗမာစကားပြောရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ရန်ကုန်စရောက်တုန်းက မပြောရဲဘူး မပြောတတ်ဘူး ငါပြောလိုက်လို့မှားသွားရင်ငါ့ကိုလှောင်မလားရယ်မလား ငါကရန်ကုန်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားမလားဆိုပြီးတွေးမိတယ်။ လူကြီးတွေက တိုက်ပေါ်ကနေ အောက်မှာတစ်ခုခုသွားဝယ်ခိုင်းရင် ဒါလေးပေးပါလို့ပြောရမှာမပြောရဲဘူး။ စကားတစ်ခွန်းပြောဖို့ရင်တွေတုန်တယ် နောက်ပိုင်းကြတော့လည်းအဆင်ပြေသွားတာပဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေက အသဲဝဲဝဲ လေးတွေနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေမှာထူးခြားတာတစ်ခုက သူတို့ရိုးရာအစားအစာတွေပဲ။ အဲလိုအစားအစာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ယမုံသဘောကျတယ်။ ဒေသအစားအစာတွေကိုကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောပြထားပြီးတော့ ထားဝယ်သူလေးပီပီ ထားဝယ်ဒေသအကြောင်းကိုလည်း“ ထားဝယ်ကခုတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းနေပြီ။ အရင်တုန်းက ထားဝယ်ကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက မငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့ကာလဆိုတော့ ကားလမ်းလာဖို့ကြောက်ကြတယ်။ အခုတော့ လမ်းတွေက အရမ်းကောင်းနေပြီ ယမုံတောင်တခါတလေ ကားလမ်းအတိုင်းသွားတယ်။ ထားဝယ်ကိုလာလည်ကြပါ ထားဝယ်မှာပျော်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် ကမ်းခြေတွေအများကြီးရှိတယ် လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်“လို့ဆက်ပြီးပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လာလည်မယ်ဆိုရင်ယမုံရှိရင်တော့ ဒေသအစားစားတွေကို အကုန်လိုက်ကျွေးပါ့မယ်လို့လည်းပြောသွားပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ တိုင်းရင်းသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထားဝယ်သူလေး ဝင့်ယမုံနိုင်တို့ …
မြမြလိုဘဝမျိုးရင်ဆိုင်နေရပြီလားလို့ တေးရေးဝေကြီးကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်….
၂၀၁၈ ခုနှစ်အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှာ အကယ်ဒမီဆုရရှိခဲ့တဲ့ မှော်ဝင်သမန်းကျားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ ဖန်တီးရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ခွန်းဆင့်နေခြည်ကတော့ သီချင်းရေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တေးရေးဝေကြီးကို နာမည်တပ်ပြီး သူမအကောင့်မှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ သူမအကောင့်မှာရေးသားထားတာကတော့ 16.1.19 က (သူ) အကောင့်နံပါတ်ပေးလို့ သီချင်းတစ်ပုဒ်စာငွေ ၆သိန်းကို မိုဘိုင်း Banking ကနေလွှဲပေးလိုက်တယ် ၂လကြာမယ်ပြောတယ်ကွယ် အိုကေ ရပါတယ်ပေါ့ နာမည်ကြီးပြီးသူရေးသမျှတော်တော်များများ ပေါက်နေတဲ့ တေးရေးဆရာတစ်ယောက်ဆိုတော့ ကိုယ်လည်းသူရေးတာလေးဆိုကြည့်ချင်လို့ နှစ်ပုဒ်အပ်လိုက်တယ်ကွယ် သူကတစ်ပုဒ်အရင်ယူပါနော်တဲ့ အလုပ်တွေကြပ်နေလို့ပါတဲ့ ရပါတယ် ဆိုပြီး သူတောင်းတဲ့ကြာချိန်၂လကိုစောင့်ပေးခဲ့တယ်ကွယ် ၂လကြာပြီးသည့်နောက် ကြားထဲမှာလည်းအကြိမ်ကြိမ် ကတိတွေပျက်တယ်ကွယ် ကိုယ်ကလည်းနားလည်ပေးတတ်သူကြီးဆိုတော့ သူပြောလာတဲ့ complain တွေ ငြီးညူမှုတွေအားလုံးကို ရပါတယ်ဘဲပေါ့နော် သူဖုန်းတခါပျောက်သွားတယ် ပြောတယ် ဘယ်လိုဆက်ဆက်မရတော့ဘဲအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလို့ နီးစပ်သူများကိုလှမ်းမေးကြည့်တော့မှ တခြားနီးစပ်သူများမှတဆင့် ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးကြလို့ သူက ကျွန်မကိုအဆက်အသွယ်ပြန် လုပ်လာပေးပြီး နက်ဖြန်ရမယ် တဘက်ခါရမယ်ပြောတယ်ကွယ် နောက် …
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ ဆိုင်ကယ်တရားဝင်စီးခွင့်ပြုလိုက်ပါက မန္တလေးမြို့ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားမည်ဟု ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး(နေပြည်တော်)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးပြောပြချက်အရ သိရသည်။ လက်ရှိ ရန်ကုန်တွင် ဆိုင်ကယ်တရားဝင်စီးခွင့်ရရန် လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခြင်း တို့ကို ဆိုင်ကယ်တရားဝင်စီးနင်းခွင့်ရရှိရေးလှုပ်ရှားနေသောကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်မှုများရှိနေသည်။ “ဆိုင်ကယ်ကို စီးခွင့်ပြုလိုက်ရင် ပိုပြီးတော့လုယက်မှုတွေများလာမယ်။ ရာဇဝတ်မှုတွေ ပိုများလာမယ်။ စီးခွင့်ပြုလိုက်ရင် မန္တလေးလိုဖြစ်သွားမယ်။ တစ်ချို့ ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေက လွဲမှားစွာ အသုံးပြုလာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အရင်ကတည်းက (၃၁) မြို့နယ်ကို ပေးမစီးခဲ့ဘူး။ ဒါကိုသာ ခွင့်ပြုလိုက်ရင် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုတွေ အများကြီးရှိလာမှာ။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲတော့ မသိဘူး”ဟု ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (နေပြည်တော်)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဆိုင်ကယ်တရားဝင်စီးနင်းခွင့်ရရှိရေးလှုပ်ရှားနေသောကော်မတီမှလည်း ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့် ရရှိရန် နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းထံ စာတင်တောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၌ လှိုင်သာယာ၊ …
တစ်ခတ်တစ်ခါတည်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်စိုးမိုးကြည်ကတော့ အကယ်ဒမီဆုကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပီပြင်ပြင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။အမေဇာတ်ရုပ်တွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာပြီး တက်သစ်စလူငယ်တွေကိုလက်တွဲခေါ်ပေးတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတိုင်းနီးပါး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပိုင်နိုင်စွာ ပရိသတ်ကြိုက်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သော ဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ” ကျောမှာဂဠုန်ရင်မှာနဂါး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ထားတာပဲဖြစ်ပြီး တစ်ကားလုံးကပညာပေးဇာတ်ကားမို့ ပရိသတ်တွေကြည့်သင့်ကားလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။” ဇာတ်ကားတစ်ကား ရိုက်ဖို့လာငှားရင် ဆင်းရဲတဲ့အခန်းတွေဆိုရင် ဘာပဲပြောပြော တော်သေးတယ်လေ၊ဆင်းရဲတဲ့အခန်းဆိုတော့ ပျော်သွားတာပေါ့။ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ အ၀တ်အစားကလည်းမ၀တ်ရဘူးမကုန်ဘူးလေ။မိတ်ကပ်ကလည်းမလိမ်းရဘူးလေ။အရမ်းချမ်းသာတယ်ဆိုရင် ခေါင်းကနေ ခြေတော်ကအထိ အ၀တ်အစား၊လက်ဝတ်လတ်စား၊ဖိနပ်၊ပိုက်ဆံအိတ်၊အစအဆုံးဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ့်အိတ်ထဲကတောင် ပိုက်ဆံစိုက်ရတယ်။ကားကြီးဆိုပိုဆိုးတာပေါ့၊ဗီဒီယိုဆို နည်းနည်းလေး သက်သာတာပေါ့လေ။ ငွေအမောက်ကိုတော့ ကိုယ်ကချိန်ရတာပေါ့ ဆင်းရဲသားအခန်း ပဲပြုတ်ရောင်းရမယ်၊ငါးစိမ်းသည်မတို့ ဟင်းသီးဟင်းရွတ်ရောင်းရမယ်လိုဆိုရင် အရမ်းပျော်တာပါပဲ” လို့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငွေကြေးအခက်အခဲအကြောင်းတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော စိုးမိုးကြည်ကိုအားပေးရင်တစ်ခုခုပြောသွားပါဦးနော်။
အရှက်အကြောက်ကြီးလွန်းတဲ့သူမကို ရည်းစားစကားစပြောပေးဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့ လုလုအောင်
ခေးကြီး ခေကြီးလုဆိုပြီး ပုရိသတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ နာမည်ကြီးလွန်းလှတဲ့ လုလုအောင်ဟာဆိုရင် အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကချင်အလန်းစား မော်ဒယ် တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ သူမဟာဆိုရင် Single Mother ဖြစ်သော်လည်း မပျက်စီးသေးသော ရှိုက်ဖိုဖွယ်ကောင်းလွန်းတဲ့ အချိုးအစားတွေကြောင့် လူကြီးလူငယ်တို့ရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှ လုမှလုဖြစ်နေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုရိသတွေ အကြိုက်ပိုပြီး လုမှလု ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ခေးကြီးလုကတော့ လတ်တလောမှာလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လှလှလေးတွေနဲ့တကွ သူမက အရှက်အကြောက်ကြီးလွန်းတဲ့ သူတစ်ယောက်မို့ ရည်းစားစကား စပြောပေးဖို့ ချစ်ရသူကို တောင်းဆိုလာတဲ့ အချစ်သားလေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ကနေ မျှဝေဖော်ပြပေးထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူမောင်ကို ရည်းစားစကား စပြောပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ စာသားလေးတွေကို မိုမိုလေး ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ …
လမ်းဘေးခွေးရှင်းလင်းသူတွေကို ခွေးချစ်သူဆိုသူတွေက ပြဿနာရှာမှုတွေရှိနေ May 20, 2019
လမ်းဘေးခွေးရှင်းလင်းသူတွေကို ခွေးချစ်သူဆိုသူတွေက ပြဿနာရှာမှုတွေရှိနေ ရန်ကုန်ရှိမြို့နယ်အချို့မှာ လေလွင့်ခွေးတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး ခွေးဂေဟာကိုပို့တဲ့ အစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေပေမယ့် တာဝန်ရှိသူတွေ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေတာကို တိရိစ်ဆာန်ချစ်သူများဆိုတဲ့ လူတစ်စုက ကို ပြဿနာရှာပြီး ခွေးများ လုယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒီနေ့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာပဲ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ရဲ့စီမံမှုနဲ့ လမ်းဘေးခွေးတွေကို လှိုင်မြို့နယ်က ခွေးဂေဟာကို ပို့ဆောင်ဖို့ စီစဉ်နေစဉ်မှာပဲ တိရိစ်ဆာန်ကာကွယ်ရေးက ဆိုပြီး လူတစ်စုက ပြဿနာရှာ လုယက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “သူတို့ ဖမ်းတာကို လာတား၊ခွေးကိုလဲ လုယူတယ်။ ဒီကိစ္စကို ဒုမြို့တော်ဝန်ဆီတင်ပြထားတယ်။”လို့ ကျောက်တံတားစည်ပင်ဥက္ကဌက Duwun ကိုပြောပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေနဲ့ လမ်းဘေးခွေးတွေဖမ်းဆီးပြီး ခွေးဂေဟာ ပို့ဆောင်ကာ မျိုးဆက်ခြားပေးတဲ့ အစီအစဉ်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခွေးရူးရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့ လေလွင့်ခွေးတွေများပြားလာတာကို မြန်မာနိုင်ငံ တိရစ်ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်းနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ Mission Rabies,WVS […]
မျက်နှာတည်နေတိုင်း စိတ်ဆိုးနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ရွှေအိမ်စည် May 20, 2019
အားလုံးပဲသိထားကြတဲ့ Miss Golden Land Myanmar အလှမယ်ရွှေအိမ်စည် ကတော့ ပရိသတ်တွေသဲသဲလှုပ်အားပေးရတဲ့သူလေးပါ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမကို ယောက်ျားလေး ပရိသတ်တွေသာမက မိန်းကလေး ပရိတ်သတ်တွေကပါ ချစ်ခင်အားပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းလိုလို ရုပ်တည်နဲ့နေတတ်တဲ့သူမပုံစံကို လက်မခံတဲ့သူတွေရှိကြသလို လက်ခံတဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေကျပြန်တော့လည်း အဲ့ဒီလိုမျိုး ရုပ်တည်လေးကိုမှ ချစ်နေရတာပါတဲ့နော်။ သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလိုရုပ်တည်နဲ့နေလို့ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုံပေါက်တာ တကယ်တမ်းစိတ်ဆိုးနေလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို “ကျမ မျက်နှာကတည်နေရင် အဲ့လိုပဲ စိတ်ဆိုးနေတာလည်းဟုတ်ဘူး ဘူနေတာလည်းမဟုတ်ဘုး အဲ့ဒါပုံမှန် စိတ်ဆိုးရင်အဲ့ထက် အဆမတန်ဆိုးတယ်” ဆိုပြီး ပြောထားပါသေးတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဟန်မဆောင်တတ်တဲ့ သူမရဲ့အပြုမူ အပြောဆိုလေးတွေကလည်း သူမကိုပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။ ရွှေအိမ်စည်ကတော့ အမြဲလိုလို ရုပ်တည်နဲ့နေတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ရီလိုက်ပြန်ရင်လည်း အသည်းတွေကြွေသွားရပါတယ်နော်။ သွက်သွက်လက်လက် ထက်ထက်မြတ်မြတ်နဲ့ အိမ်စည်လေးကတော့ အမြဲတမ်း ဖက်ရှင်အလန်းစားတွေဝတ်တတ်လွန်းတာကြောင့် […]
ရွှေထူးနဲ့ရွှေမှုံရတီတို့ကို ကလေးမယူစေချင်သေးတဲ့ ရွှေမှုံရတီ့အမေ May 20, 2019
ချစ်သူနဲ့ လက်တွဲခြင်းက ဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိ May 20, 2019
ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုနဲ့ ဂရုစိုက်ခြင်းတို့ကို ပြသတာဟာ ကိုယ့်အနီးက လူတွေကို ကိုယ့်ဘဝအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါကြောင်း ပြသတာဖြစ်သလို ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်နေရချိန်၊ ဖျားနာနေချိန် သို့ ဝေဒနာခံစားနေရချိန်တွေမှာလည်း သက်သာရာရစေတာဟာ ငြင်းဆန်လို့မရတဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှင်းလင်းချက်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ မကြာသေးခင်က ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာ လူသားတွေရဲ့ အထိအတွေ့ဟာ အခြားသူတွေအတွက် ဘာလို့ သက်သာရာ ရစေတယ်ဆိုတာကို စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုစမ်းသပ်ရာမှာတော့ “ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့အခါ ချစ်သူလက်ကို ဆွဲကိုင်ထား” ခြင်းဟာ တကယ်ပဲ ခံစားနေရတဲ့ စိတ္တ ကာယဝေဒနာတွေကို သက်သာရာရစေပြီး နာကျင်မှုကိုပါ ခံနိုင်ရည် ပိုရှိစေတယ်လို့ ရလဒ်က ဆိုပါတယ်။ ချစ်ခင်သူတွေရဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်မှု၊ ထိတွေ့မှုတွေဟာ ဝေဒနာကိုသက်သာစေကြောင်း ခေတ်အဆက်ဆက် ပြောလာခဲ့ပေမယ့် အခုမှသာ စနစ်တကျ စမ်းသပ်ခဲ့ကြတာလို့ […]
အဆိုတော် သားသားနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့ ခေမာ May 20, 2019
ခေမာဟာဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတန်ကြာကတည်းက အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Supermodel အဆိုတော်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခေမာဟာ သီချင်းတွေကို ပရိသတ်တွေရင်ထဲရောက်အောင်ဆိုတတ်သူမို့ လူငယ်ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ခေမာက အဆိုတော်သားသားနဲ့ အချိန်တွေအကြာကြီးချစ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး လမ်းခွဲလိုက်တာကတော့ နှစ်အနည်းငယ်ရှိပါပြီ။ မကြာသေးမီက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ခေမာက လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းနဲ့ သားသားနဲ့လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြောင်းပြောပြထားပါသေးတယ်။ခေမာက လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ထွက်ဖို့ရှိကြောင်း “ခေမာ Record သီချင်းခွေထဲမှာ ရူးနေပြီဆိုတဲ့သီချင်းလေးပေါ့နော်။ ခေမာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ Duet ပုံစံလေးဆိုထားတာပေါ့။ သီချင်းပုံစံကတော့ ရူးနေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ ရူးနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို crush တယ်ပေါ့။ ငါနင့်ကိုရူးရူးမူးမူးစွဲလန်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတာပါ။ သီချင်းကတော့ အေးအေးလေးပဲ”လို့ပြောပြထားပါတယ်။လက်ရှိ show ပွဲဈေးကွက်တွေမရှိတော့ပဲ EDM တွေက အစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အပေါ်ကို ခေမာက “အမှန်အတိုင်းပြောရင်အများကြီးနစ်နာတယ်ပေါ့။ တော်တော်ကိုအများကြီးနစ်နာတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင် Show ပွဲဆိုတာ သိသိသာသာကိုမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ ပျောက်တောင်ပျောက်ကွယ်ခါနီးဖြစ်နေပြီ။ ကိုဘိုစန်းတို့ဒီလိုအခွေတွေပြန်ထုတ်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ကောင်းတယ်။ခက်ခဲနေတဲ့ကြားကမှ ဒီအခွေကိုသူတို့ရအောင်စီစဉ်တယ်ပေါ့နော်။ […]
PUBG ဂိမ်းထဲကလို PreWedding ရိုက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က စုံတွဲ May 20, 2019
Global မှာတင်မကပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ ကစားသူအများအပြားဖြစ်နေတဲ့ Global Top 1 ဂိမ်း PlayUnknownBattleGround(PUBG) ကိုတော့ ဂိမ်းကစားတဲ့ သူတော်တော်များများ ရင်းနှီးကြမှာပါ။ Survival ဂိမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အဖွဲ့လိုက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလောက်အောင် ဆော့ရတဲ့ ဂိမ်းဖြစ်တာကြောင့် တကမ္ဘာလုံးမှာ ခေတ်စားနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုခေတ်စားလာတဲ့ အလျောက် PUBG ဂိမ်းရဲ့ Trends တွေကတော့ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ယခုမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ PUBG ဂိမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်တွေလိုမျိုး ဝတ်ဆင်ပြီး ထူးထူးခြားခြား Pre Wedding ရိုက်ထားတဲ့ စုံတွဲကတော့ Social Media ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Cosplay တွေမှာလည်း PUBG ဂိမ်းထဲကလို ပုံစံမျိုး ခေတ်စားလာပြီး Tik Tok မှာလည်း […]
လူငယ်ဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ လန်းနေတဲ့ ဆုအိမ့်စံ May 20, 2019
စကားပြောရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောေါလး ဆုအိမ့်စံကတော့ အချိုးအစားကျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ ဆုအိမ့်စံက လူငယ်ဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ လန်းနေတဲ့ သူမရဲ့အလှပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖြူဝင်းတဲ့ အသားအရည်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဘေဘီဆုလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေက အရမ်းကို လှနေတာပါနော်။မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဆုအိမ့်စံရဲ့အလှပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဆုအိမ့်စံကတော့ “ရင်ခုန်သံ ထိန်းချုပ်ဖို့တော့ခက်နေပြီ … 💙❤️💟 EMPRESS_HSU ☘️🌟” ဆိုပြီး သူမရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဆုအိမ့်စံကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း သရုပ်ဆောင်နေရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ဆုအိမ့်စံရဲ့အချစ်ရေးကတော့ ချစ်ရသူနဲ့အတူ အေးချမ်းသာယာစွာ ရှေ့ဆက်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေလည်း အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ […]
ကိုယ့်သီချင်းကိုယ် Cover ပြန်ဆိုမယ့် ထူးအယ်လင်း May 20, 2019
ကော်ဖီကိုလွန်စွာကြိုက်ပြီးရေလိုသောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး အရိုးပွရောဂါခံစားခဲ့ရ May 20, 2019
ကော်​ဖီကိုလွန်စွာကြိုက်ပြီး​ရေလို​သောက်​ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး အရိုးပွ​ရောဂါခံစားခဲ့ရ တရုတ်​ပြည်​က Han Xiao ဆိုသူ အသက်​ ၃၀ အရွယ်​ အမျိုးသမီးဟာ ​ကော်​ဖီကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းနဲ့ ​သောက်​သုံးလာခဲ့တာဟာ ၇ နှစ်​​ကျော်​လာခဲ့ပါပြီ။ သူက ​ကော်​ဖီကို ​ရေလို​သောက်​သူပါ။ ​ကော်​ဖီကို တစ်​​နေ့ အနည်းဆုံး ၁၀ ခွက်​အထိ​သောက်​ပါတယ်​။သူရုံး​ရောက်​ပြီဆိုတာနဲ့ အရင်​ဆုံးလုပ်​တာက ​ကော်​ဖီ​ဖျော်​​သောက်​တယ်​။ ပြီးမှ အလုပ်​​တွေဆက်​လုပ်​နိုင်​မယ်​လို့ သူက ယုံကြည်​ထားတယ်​။ သူရဲ့ရုပ်​ပိုင်းစွမ်း​ဆောင်​ရည်​​ရော စိတ်​ပိုင်း​စွမ်း​ဆောင်​ရည်​ပါ ​ကော်​ဖီ အ​ပေါ် မှီခိုစရာဖြစ်​လာတဲ့အထိ လို့ အတိအကျ​ပြောလို့ရပါတယ်​။တစ်​ရက်​​တော့ ၁၀ မိနစ်​​လောက်​ မရပ်​မနား သူ ထူးထူးခြားခြား ​ချောင်းဆိုးပါတယ်​။ နာကျင်​​ပေမယ့်​ အလုပ်​​တွေဆက်​လုပ်​​နေလိုက်​တယ်​။ အိမ်​ပြန်​​ရောက်​တဲ့အချိန်​မှာ အိပ်​ယာ​ပေါ်အလူးအလှည့်​​တောင်​မရ​တော့ဘူး။ မနက်​​ဆရာဝန်​​ပြေးပြ​တော့ ​ချောင်းဆိုးတဲ့ဒဏ်​နဲ့တင်​ သူဟာနံရိုးသုံး​ချောင်းကျိုးသွားခဲ့တယ်​။ ဆရာဝန်​ရဲ့​စစ်​​ဆေးချက်​အရ သူရဲ့ အရိုးတွင်းသိပ်​သည်းဆ နဲ့ သံဓာတ်​အားက အသက်​ […]
ကော်ဖီကိုလွန်စွာကြိုက်ပြီးရေလိုသောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး အရိုးပွရောဂါခံစားခဲ့ရ …. May 20, 2019